के आमिर खानले गर्दैछन् तेस्रो बिहे ? - Nagarik Today
होम » के आमिर खानले गर्दैछन् तेस्रो बिहे ?
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आमिर खानको तेस्रो विवाहको बारेमा निकै चर्चा भइरहेको छ । आफ्नो नयाँ फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ को रिलिज (१४ अप्रिल, २०२२) पछि उनी तेस्रो विवाह गर्न तयारीमा रहेको गाइँगुइँ सुनिएको छ । तर, इन्डिया टुडेलाई आमिर खानसँँग जोडिएको एक विश्वसनीय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, उनले तेस्रो विवाह गर्न लागेको चर्चामा कुनै सत्यता छैन ।
aamir khanaamir khan second marriedactor aamir khan